sawehlor: January 2012
ကိုဇော်ရဲ့ မူရင်းစာအုပ်လေးပါဒီစာအုပ်လေးရဲ့ ထူးခြားမူ့ ကတော့
လေးတွေဖက်လို့ ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့ နည်းလေးကိုလည်း
စာအုပ်လေးပေါ်တွင်ရှိသော Expand ကိုက
Posted by saw ehlor at 23:040comments
Virus ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မှတ်ထားတဲ့
ဖိုင်လေးတွေ ပျောက်သွားရင် ပြန်ဖော်နည်းလေးကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ အရင်
ဆုံးလုပ်ရမှာက Hidden လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်လေးထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Tools-----> Folder Options ----> View ထဲက
Hidden Files & Folder ထဲကနေ Show Hidden File, Folder & drives ကိုရွေးပေးပါ။ ဒါမှမပေါ်လာသေးရင်
Hide Protect Operating System File(Recommemded) ကို အမှန်ခြစ်လေး
ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမပေါ်လာရင်
CMD တက်လာပါက ကိုယ်ဖော်ချင်တဲ့ Folder ထဲကို
ဝင်ပါ။ ဥပမာ- ပျောက်နေတဲ့ဖိုင်တွေ
ရှိတဲ့နေရာက stick ထဲမှာဆိုပါက stick
နာမည်ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ stick Name : E ဆိုပါက ( E:)ဟု ကွန်မန်း
လိုင်းထဲတွင်ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ထိုအခါ E :ထဲသို့ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပျောက်နေတဲ့ဖိုင်ကိုဖော်ဖို E:\_> attrib -S-H-R-A *.*/S/D
လို့ ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ S ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က S။ H အဓိပ္ပာယ်က hidden file
R က Read-Only File ကိုခေါ်တယ်။
ဖိုင်လေးတွေကို ပြန်ဖော်ဖို့အတွက် အဆင်
Posted by saw ehlor at 22:300comments
PC- Mechanic (Diagnostic of PC using by order tracking) mm Ebook
မိမိPC ကွန်ပျူတာ error ဖြစ်ပေါ်ပါက စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းစာအုပ်လေးပါ။
ကွန်ပျူတာ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းက ပျက်နေသည်ဆိုတာကို တစ်ဆင့်ချင်းစစ်ဆေးပုံ၊ ပြဿနာများ။ အကြောင်းရင်းများ၊
လက္ခဏာများ၊ ဖြေရှင်းပုံများ သိသင့်သိထိုက်သည်များ ကိုဤစာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကိုဇော်လင်း _Youth computer Group ကရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ
ကွန်ပျူတာသမားများအတွက် လက်စွဲထားသင့်တယ် ထင်လို့ပါ..http://www.blogger.com/img/blank.gif
ဒါကတော့ လက်တော့ အသစ်ဝယ်မဲ့သူများ ၊ ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်း services များကိုသိလိုသူတွေအတွက်
Laptop Services Guide ဖစ်ပါတယ် အဆင်ပြေကြပါစေ
Posted by saw ehlor at 22:220comments
ProShowProducer လို့ခေါ်တဲ့ Movie Maker ဆော့လ်ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ http://www.blogger.com/img/blank.gif
Portable လေးလည်းဖြစ်တော့ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်
လုပ်နည်းကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်.....။ဓာတ်ပုံတွေ Movie တွေနဲ့  Movie ကောင်းကောင်းဖန်တီးချင်သူတွေ
Movie ကို .mpg နဲ့ သိမ်းမှသာ MB နည်းနည်းနဲ့ သိမ်းဆည်းနိုင်မှာပါ..။
Posted by saw ehlor at 22:14 1 comments
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများအတွက် မေးခွန်းဟောင်းတချို့ တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ မေးခွန်းဟောင်းများကို ကြည့်ရတာ လွယ်ကူအောင် iPhone မှာ ထည့်သုံးလို့ ရအောင်ဆိုပြီး MS ကနေ PDF ပြောင်းပေးထားပါတယ်.File Size 236 kb ပဲရှိပါတယ်. အပိုင်း ၂ ကို PDF ပြောင်းပြီးရင် တင်ပေးပါ့မယ်...မေးခွန်း အဖြေ အမှား အမှန်ကိုတော့ မိမိကိုယ်မိမိ လေ့လာပါ။
မူရင်း - စင်္ကာပူရောက်မြန်မာသူနာပြုများ
Posted by saw ehlor at 08:450comments
PDF ဖိုင်တွေကို ဖတ်ရူရုံတင် မဟုတ်ဘဲ မိမိမှတ်သားချင်တာ တွေကိုပါ ထင်ထင်ရှားရှား မှတ်သားနိုင်ဖို့ အတွက် PDF Editor လေးပါ။ သူ့ရဲ့အဓိက အားသာချက်ကတော့ Adobe reader မရှိဘဲနဲ့ PDF ဖိုင်တွေကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိစိတ်ကြိူက် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ် နိုင်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Microsoft Word နဲ့ Paint Function နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြူနိုင်တဲ့ သဘောပါ။ ဆော့ဝဲရမ်းပြီး အသုံးပြူလို့ ရသလို Portable အနေနဲ့လည်း အလွယ်တကူ အသုံးပြူလို့ရအောင် နှစ်မျိူးစလုံး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ တကယ်လိုအပ်သလို အသုံးလည်းတည့်လို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မူရင်းးမိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ)
Posted by saw ehlor at 02:430comments
၃ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၁မူရင်းးLink
Posted by saw ehlor at 23:500comments
ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲ့မှာ ခံစားနေရတာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်တာထက် ပြန်လည်ပြောပြချင်နေမိတာပါ။ တကယ်တော့ လူကျင့်ဝတ် လူစည်းကမ်းဆိုတာ အလိုလို သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို သိရတာကိုဆိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် စကားကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး အများကြီးတော့ မပြောတက်ဘူး။ ပြောချင်တာကို တည့်တည့်ပိတ်ပြောတက်တယ်။ စာဖတ်နေတဲ့ ပညာရှာနေတဲ့ လူတိုင်းကို ကျွန်တော် လေးစားပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းလည်းစာပါတယ်။ ဒါပေ့မယ့် ဖြတ်လမ်းနည်းကနေ ကျွန်တော်တို့ကို ဒုခ ပေးနေသူတွေကိုတော့ သူလမ်းနဲ့ သူ သွားမှာမှန်းသိပေ့မယ့်လည်းဗျာ စာရေးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရင်ထဲ့ ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာကို ခံစားကြည့်ပေးဖို့ ဒီပိုစ့်လေးကို ကျွန်တော် ဆက်ဖတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 18:28 1 comments
ကွန်ပျူ တာ keyboardတစ်ခုလုံးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 07:530comments
တဲ့ပါတယ်..။ကျွန်တော်ဆိုအခု Software တစ်ခုခုကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင် Ifile.it , Mediafire စတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ
တစ်ခုချင်းဆီမှာလိုက်ပြီးတော့ Upload တင်ရပါတယ်..။ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Upload ဆိုဒ်
တစ်ခုကနေတင်လိုက်တာနဲ့အခြား Upload ဆိုဒ်တွေမှာပါတစ်ဆင့် Upload တင်ပေးမယ့်ဆိုဒ်တွေအကြောင်း
နေမင်း Blogger facebook မှ...ကူးယူဖေါ်ပြသသည်။
Posted by saw ehlor at 06:16 1 comments
Posted by saw ehlor at 04:340comments
Posted by saw ehlor at 03:330comments
Labels: How to Make Myanmar Blog
အခု ကျွန်တော် မေးထားတဲ့ အကိုတစ်ယောက်လည်း ရှိတာနဲ့ တစ်ခြား အခက်အခဲ ရှိတဲ့ သူတွေလည်း အဆင်ပြေအောင် Firefox မှာ အသံမလာဘူး ဆိုရင် ဖြေရှင်းလို့ ရမယ့် နည်းလမ်းလေးကို Video Tutorial လေးရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. နည်းလမ်းလေက လွယ်ပါတယ် .. သေချာ ရှင်းပြပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ပြန်မရေးပေးတော့ပါဘူး .. ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ သီချင်းတွေကို Audio Player တွေနဲ့ ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ အသံလာပြီး Firefox မှာ ဖွင့်မယ် ဆိုရင် အသံမလာတာမျိုး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သူတွေအတွက် အခုနည်းလေးက အထောက် အကူ ပေးပါလိမ့်မယ် .. အောက်မှာ ကျွန်တော် နှစ်နေရာ ခွဲတင်ပေးထားပါတယ် .. အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ချသွားလိုက်ပါ ..
Source : ကောင်လေးငယ်
Posted by saw ehlor at 02:210comments
XiliSoft Video Converter ကဗီဒီယိုတွေကို အမျိုးအစားများစွာ Convert လုပ်ပေးပါတယ်။ XiliSoft ကို ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်း ကတော့သူ့အမျိုးအစားနဲ့သူရွေးပေးလိုက်ရင် သူ့ပါသာသူပြောင်းပေးသွားလို့ပါပဲ။ ဥပမာ-Psp ထဲထည့်မယ် ဆိုရင် Psp ကိုရွေးပေးပြီးတော့ ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားကိုထားပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်Convert လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင် Psp ထဲမှာ Convert လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ကို ပြန်ပြီးတော့ကူးပြီး Psp နဲ့ပြန်ဖွင့် ကြည့်ပါ။သေချာပေါက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။Serial Key ပါထည့်ပေးထားပါတယ်...ကီးမထည့်ခင်အရင် ReadMe File-ကိုဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ်...ဆော့ဝဲအညွှန်းတွေနဲ့-Serial-သုံးပုံကိုရှင်းလင်းစွာရေးသားပေး ထားပါတယ်။စာတွေလည်းတော်တော်များသွားပြီး...အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပေတော့..။
Source : Kogeeelay
Posted by saw ehlor at 13:350comments
ပါအကြောင်းအမျိူးမျိူးကြောင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုခုဖြစ်သွားတဲ့အခါအသံမလာတာ တို့ 
Posted by saw ehlor at 00:470comments
Posted by saw ehlor at 18:210comments
မြန်မာ သက္ကရစ်ခုနှစ်၊ ရက်စွဲများ ဘလော့မှာပေါ်ချင်သူများအတွက် မာ့ခ်၏ ကိုယ်​ပိုင် အတ္တများ
နာမည်ကတော့မိုက်တယ်နော် (နာမည်တွေ့တာနဲ့ကြောက်စရာကြီး) ကျနော်တောင် အဲဒီဆိုက်ရောက်ရင် ကြောက်ကြောက်လာတယ်။သူ့ဆိုက်ကိုရောက်ရင် အသာလေးပြန်လှည့်လာရတယ်။ တော်ကြာဆော်ထည့်
လိုက်မှ ရှိစုမဲ့စုလေးတွေကြွကုန်အုံးမယ်။နောက်တာပါဗျာ....နာမည်ကြမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် စိတ်ကောင်းမယ့်
ကျနော်တို့လို ၀ါသနာမျှသာရှိပြီး နည်းပညာမရှိသူတွေအတွက် အဲဒီဆိုက်တွေကို အားကိုးရတယ်လေ။ တကယ်တော့
သူတို့တွေဟာ နည်းပညာတွေကို အဖိုးအခတစ်ပြားတစ်ချမယူပဲ စေတနာပြည့်ဝစွာဖြင့် ဝေငှတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နည်းပညာရေးသားသူအားလုံး ကျနော်က သူတို့ကို မတွေ့မမြင်ရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာအမြဲကျေးဇူးတင်မိတယ်။
နောက်ပြီး သူတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ ထာဝရအောင်မြင်ကြပါစေဆိုပြီး မေတ္တာပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဓိကပြောလိုသည်မှာ သူ့ဆိုက်မှာဒီအကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်။ အောက်ဆုံးကလင့်ပေးထားပါတယ်။
အော်မြန်မာ ပြက္ခဒိန်ထည့်နည်းက ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်၊ အဲ...ထည့်ချင်ရင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ပါ....
Posted by saw ehlor at 18:070comments
Posted by saw ehlor at 17:570comments
Posted by saw ehlor at 17:360comments
ကရင်ဘာသာအားဖြင့် “က္လိုအိုဝ်တ္လာအိုဝ်” ဟုခေါ်သည့်
အရေးကြီးဆုံး ပြယုဂ်များတွင် တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
အလားတူ စည်များကို တရုတ်၊ မွန်ဂိုလီးယားနှင့် အခြားအ
ရှေ့ တောင်အာရှဒေသများတွင် ပျံ့ နှံ့ စွာ တွေ့ ရသည်။
ကရင်ဖါးစည်ဖြစ်သည်။ ဖားစည်တွင် လုံးရှည်ပုံ
ကိုယ်ထည်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်သည် အနည်းငယ်ကျယ့်အ
ပြန့် ပြီး အလယ်ဗဟိုရှိ ကြယ်ကို ၀န်းရံထားသော စုဆုံစက်ဝိုင်း
သဏ္ဍာန်မျိုးစုံဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်
ထောင့်စွန်းဝန်းကျင်တွင် လေး သို့ မဟုတ် ခြောက်
အရေအတွက်ရှိသော ဖားများ အကွာအဝေး
အရွယ်အစားအမျိုးအမျိုး ပြောင်းလဲမှုရှိပြီး ၎င်းတို့ ကို
သေးငယ်သော လက်ကိုင်နှစ်ခုဖြင့် သယ်ဆောင်ကြသည်။
ဖါးစည်၏ မူလအစကို မည်သူမျှသေချာ မသိပါ။ ကရင်ရိုးရာ
အဆိုအရမူ တစ်နေ့ သ၌ ဖူးမော်ထော်ဟု ခေါ်သော
ကရင်အဘိုးတစ်ယောက်သည် သူ့ ထံ သို့ဦးတည်လာသော
မျောက်ရိုင်းတစ်အုပ်ကို တွေ့ ရသည်။ အသက်အန္တရယ်ကို
ကြောင့်ရွံ့ သောကြောင့် သူလည်း သေချင်
ဟန်ဆောင်လိုက်သည်။ ၎င်းအချင်းအရာကို တွေ
့မြင်ရသောအခါ အသုဘ အခမ်းအနားအတွက် အုပ်စုထဲမှ
မျောက်များကို စည်ပြန်ယူခိုင်းလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်
မျောက်များသည် ဖါးစည်(၃)မျိုး ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်နှင့်
အဖြူရောင်ဖါးစည်များကို ယူဆောင်လာကြသည်။ စည်များကို
တီးခတ်စဉ်အတွင်း ဖူးမော်ထော်က ထထိုင်လိုက်ရာ
မျောက်များက လန့် ပြီး ထွက်ပြေးသောကြောင့်
အဖြူရောင်ဖါးစည်သည် ရေထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားတော့သည်။
ကရင်လူမျိုးများထံ ယူဆောင်လာပြီးချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့ သည်
ကရင်လူမျိုးတို့ ၏ အမြတ်နိုးဆုံးအရာများ ဖြစ်သွားကြသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ဖါးစည်များကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း “က္လိုထူးဂေါ်”နှင့် က္လိုခွါ့ ဆေး”ပွဲတော်ကို
Posted by saw ehlor at 02:18 1 comments
Labels: ကရင့်ရိုးရာ ကြေးဖါးစည်
ကျနော်တို့ window တွေတင်ပြီးလို့ update တွေပေးလိုက်ရင် genuine မဖြစ်တော့ပဲ Update
ထဲမှာစစချင်း တင်ထားတဲ့ keyတွေကိုဖျက်လိုက်တဲ့ update ဖိုင်လေးကို
ဒေါင်းလိုက်မိလို့ပါပဲ၊၊အဲ့လိုဖြစ်သွားရင် activate လေးရမ်းဖို့ လုပ် ၊ မလုပ်ရသေးခင်
မိုက်ကရိုဆော့ essential က ဖျက်ဖြစ် ရွာကိုလည်နေတာပဲလေ၊၊
ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဒီ update ဖိုင်လေးကို အလွတ်မှတ်ထားသင့်နေပါပြီ၊၊အများဆုံးဖြစ်တတ်တာ
လကုန်ခါနီး ရက်တွေမှာ တောင်းတဲ့ updateတွေမှာ ပိုဖြစ်များတတ်ပါတယ်၊၊
အဲ့ Update file လေးနာမည်ကတော့ update KB971033 ပဲဖြစ်ပါတယ် ၊၊
ခုကတော့ သူ့ကို update ပေးမိတဲ့ စက်တွေတွက် ပြန်ပြီး ဖြုတ်တာလေးကိုပြောပြပေးလိုက်ပါမယ်၊၊
စစချင်း update history ထဲမှာ ခုနက ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ နာမည် KB971033
တွေ့ရင် တော့ Control panel ထဲက Control Panel\_Programs and Features ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ..
ပြီးရင်ဘယ်ဘက် နားမှာ view update history ဆိုတာလေးကို တွေ့ပါလေ့မယ်၊၊ သူ့ကို ထပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ၊
ကျနော်ပြောတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖိုင်လေး တွေ့ရှိရင် ပြန်ပြီး uninstall လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊၊
ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ကျမှာပါ နောက်တခါ update ပေးခါနီးကျရင် တချက်လောက် စစ်ဆေးပြီးမှ စိတ်ချ လက်ချ ပေးစေချင်ပါတယ်
Posted by saw ehlor at 09:570comments
ဒါကတော့ kaspersky anti virus (KAV) နောက်ဆုံးထွက် version ပါ. လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . ဖိုင်ဆိုက်က သိပ်မကြီးပါဘူး. တောင်းတဲ့သူများလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . key ကတော့ ဘယ်လို ထည့်ရတယ်ဆိုတာကို ရေးထားပေးပြီးသားပါ။ ထည့်တတ် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်းမှာ kaspersky keys တွေကို version အားလုံးအတွက် အမြဲတမ်း up to date တင်ပေးနေပါတယ် .
Download mirrorcreator | Megaupload | Mediafire | Zshare | rapidshare | ifile.it
Posted by saw ehlor at 06:260comments
Posted by saw ehlor at 03:430comments
Posted by saw ehlor at 00:200comments
ကွန်ပျူ တာတွင်ရှိသင့်သည့် WinRAR ဆော့ဝဲ 32 bit / 64 bit
ဆော့ဝဲကို Run ပြီးလျှင် အောက်မှာလိုင်စင်ကီး rarreg ကို Copy ယူလိုက်ပါ ပြီးရင် Desktop ပေါ်က WinRAR icon ကို Right Click ထောက်ပြီး Properties ပြီးရင် Open file location မှာ လွတ်တဲ့နေရာ Mouse ထောက်ပြီး Paste ချလိုက်ပါ။ License Version သုံးလို့ရပါသည်။
Posted by saw ehlor at 00:080comments
Labels: WinRAR ဆော့ဝဲ 32 bit / 64 bit
ကွန်ပျူ တာစတင်သင်ကြားသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လက်ကွက်လေ့ကျင့်ရန်ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်။ Download ချပြီးလျှင် WinRar ဖြင့်ဖြည်လိုက်ပါ။ရရှိလာသောဖိုင်အသစ်ကို install လုပ်လိုက်လျှင်ရပါပြီ။
ဖိုင်ဖြည်နည်းကတော့ Rightclick ထောက်ပြီး Extractfiles... ကလစ်လိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Keep broken files ကို အမှန် ခြစ်ပြီး Ok နှိ်ပ်လိုက်ရုံပဲ။
ရရှိလာတဲ့ဖိုင်အသစ်ထဲက setup.exe ကိုကလစ်လိုက်ပြီး Run လိုက်ပါ။ Register Now ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ Finish ကိုနှိပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ပါ။ Desktop မှာပေါ်လာတဲ့ MB icon ၂ချက်ကလစ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ Enter Name Here မှာမိမိနာမည်ထည့်လိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Ok ကိုနှိပ်ပြီး TakeaLesson ကလစ်လုပ်ပြီးလျှင် STARTနှိပ်ပြီးစတင်လေ့ကျင့်လို့ရပါပြီ။
Posted by saw ehlor at 23:360comments
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း နဲ့ ဟိန်းဝေယံ တို့ရဲ့ အချစ်မီး
အဆိုတော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း နဲ့ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံရဲ့ ဖခင်အကြား ဝိုင်းစုနဲ့ ဟိန်းဝေယံတို့ ခိုးပြေးခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပီး အပြန်အလှန် ငြင်းဆို ပြောခဲ့ကြတဲ့ အသံဖိုင်ပါ။ ဒီအသံဖိုင်ကို Facebook စာမျက်နှာမှာ တင်ပီး ဖြန့် ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာပရိတ်သတ်အကြား အထူးစိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေတာပါ။ အသံဖိုင်ထဲမှာပြောတဲ့ စကားအရ ဝိုင်းစုနဲ့ ဟိန်းဝေယံ တို့ ခိုးပြေးခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်ကဖြစ်ပီး ဒီအသံဖိုင်ဟာလည်း အဲ့ဒီတုန်းက ဝိုင်းစုဖက်က record လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်လို့ သုံးသပ်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း လက်ထပ်တော့မယ်လို့ သတင်းထွက်နေချိန် အခုလို ၃နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပီးချိန်မှ ဒီအသံဖိုင်ကို ဘယ်သူက အင်တာနက်ပေါ် တင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကလဲ မေးခွန်း ထုတ်စရာပါ။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း ပါ ဟိန်းဝေယံ နဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ သရုပ်ဆောင် ယိန်းဝေယံက ချစ်သူလည်း မရှိဘူး ရည်းစားလဲ မရှိဘူးလို့ ဖြေထားတဲ့အပြင် ဘဝလက်တွဲဖော် ဘယ်တော့ရှာမှာလဲ မေးတဲ့မေးခွန်းအပေါ် ကြားရတာနဲ့ တောင် ကြက်သီးထတယ်လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။
WyneSu by Erickimhttp://www.myanmarcelebrity.com
WyneSu by Erickim
Posted by saw ehlor at 14:070comments
အခုကျွန်တော် ဓာတ်ပုံအလွယ်တကူ ပြုပြင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် Photo Makeup Editor လေးတင်ပေးလိုက် ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘာအတွက် အသုံးပြုနိုင်လည်း ဆိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက် အလှပြင်ယူလို့ ရတဲ့ သဘောမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ် .. အပြင်မှာ မိတ်ကပ်လိမ်း သလိုပဲပေါ့ဗျာ .. အသုံးပြုရတာ လွယ်ပါတယ် .. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးနဲ့ အသုံးပြု လို့ရအောင် Serials Key လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် .. လိုအပ်လို့ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ ..
Posted by saw ehlor at 06:330comments
Labels: Photo Makeup Editor
အင်တာနက်ပေါ်က အချစ်လေးတွေပါ... ဘာသာပြန်မျှဝေခံစားပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 04:220comments
ချစ်တယ်ဆိုတိုင်း နားလည်မှုပေးနိုင်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
မူရင်းလင့် --- http://www.duwenzhang.com/wenzhang/aiqingwenzhang/ganwu/20110822/197585.html
Posted by saw ehlor at 04:130comments
Posted by saw ehlor at 04:000comments
Posted by saw ehlor at 03:290comments
Posted by saw ehlor at 03:110comments
Posted by saw ehlor at 21:340comments
ကျွန်တော် Avast AntiVirus 5.0.5 ကို Serials Keys လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်စက်ကိုဒီတိုင်း
ပစ်ထားတာတစ်ပါတ်လောက်၇ှိပြီ..။အ၇င်၇ှိပြီးသား Antivirus ကိုဖြုတ်ပြီးပြန်တင်မယ်တင်မယ်နဲ့ဒီတိုင်းထား
လိုက်တာဒီနေ့တော့ Antivirus လေးတော့ပြန်တင်ထားလိုက်ပါအုံးမှဆိုပြီးလိုက်၇ှာလိုက်တာဒီကောင်လေး
ကို Serials Keys လေးနဲ့၇လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Avast ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့အဆင်
ပြေမှာပါ။ Trail Version သုံးစ၇ာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ..။ကျွန်တော် Keys ထည့်နည်းလေးကိုတော့အောက်မှာ
လိုအပ်၇င်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။နောက်မှပဲ virus နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်ထားတာလေး
Posted by saw ehlor at 21:250comments
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Avast Antivirus Pro လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ License key ရဲ့ Expiry Date
ကတော့ ခေါင်းစဉ်မှာ ပြပေးထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ 2038 အထိပါ။ Avast ကိုအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေ
အောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Update ထွက်လာတိုင်းလဲ တင်တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 70 MB ရှိပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
Downlaoding from ifile.it
Posted by saw ehlor at 20:120comments
Posted by saw ehlor at 19:570comments
ကဲ ပထမဦးဆုံး Program ကို အရင် Download လုပ်လိုက်ပါဦး . အရင်က ဒီပို့စ်မှာ တင်ထားပေး ပါတယ် . Download လုပ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံအတိုင်း ကိုဖြေမယ့်ဖိုင်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုထားလိုက်ပါ .. ပုံနှင့် တစ်ပုံချင်းစီ ပြထားပါတယ် . ပုံသေးနေရင် ကလစ် နှိပ်လိုက်ပါ ပုံကြီး ထွက်လာပါ လိမ့်မယ် .. Hj split ဟာ ဖိုင်ခွဲတဲ့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးပါ. win rar တို့ win zip တို့က ဖိုင်ခွဲပြီး ပြန်ပေါင်းတဲ့ အချိန်မှာ error တက်တတ်ပါတယ်. hj split မှာတော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်.
Posted by saw ehlor at 19:430comments
Labels: HJSplit ဖြင့် ဖိုင်ဖြေနည်း
Posted by saw ehlor at 19:120comments
ဒီအဖြစ်အပျက်က လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာက နွေရာသီတစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တစ်ခါက နေရာအနှံ ခြောက်သွေ့ပြီး ဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေတဲ့ သဲကန္တာရ ထဲမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ပန်းကလေး တစ်ပွင့် ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဘာသာသူကြီးထွားလာခဲ့ပြီး နေ့တိုင်းလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ နေမင်းကိုမေးတယ်။ “ကျွန်မ ဘယ်အချိန် ကြီးလာမှာလဲ” တဲ့။ နေမင်း ကလည်း ပြန်ပြောတယ်။“သည်းခံပါဦး ကလေးရယ်၊ ငါမင်းကို ထိတွေ့တိုင်း မင်း နည်းနည်း နည်းနည်းကြီးထွားလာတာပဲ” တဲ့။ သူမကလည်း သဘောကျသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူမမှာဒီသဲကန္တာရကြီးကို လှပစေနိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း တစ်ခု ရှိလိမ့်မယ် ဆိုတာသိလိုက်ရလို့ပဲ။ အဲဒါ သူမ လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စပဲ ... ဒီကမ္ဘာကြီးကို နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် လှပမှုတွေ ယူဆောင်ပေးချင်တယ်လေ။
တစ်နေ့မှာ မုဆိုးတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့ပြီး သူမကိုနင်းမိခဲ့တယ်။ သူမ သေကာနီး ဆဲဆဲ ဖြစ်သွားပြီး ဝမ်းနည်းနေရတယ်။ သူမ သေတော့မှာမို့လို့ ဝမ်းနည်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမမှာ ဒီ သဲကန္တာရကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မယ့် အခွင့်အလမ်း မရှိတော့လို့ ဝမ်းနည်းတာပါ။
တန်ခိုးကြီး နတ်ကောင်း တစ်ပါး က သူမကို တွေ့ခဲ့ပြီးသူမ ပြောတာကို နားထောင်မိခဲ့တယ်။ “သူမ အသက်ရှင်သင့်တယ်” လို့ သူက ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့ အောက်ကို ငုံပြီး သူမကို ထိတွေ့ကာ သူမရဲ့ ဘဝကို ပြန်ပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီနောက် သူမဟာ လှပတဲ့ ပန်းကလေး တစ်ပွင့် အဖြစ်ပွင့်လန်း လာခဲ့ပါတယ်။ သဲကန္တာရကြီးရဲ့ ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ဟာလည်း သူမကြောင့် မို့လို့လှပလာခဲ့ပါတော့တယ်။
(မြန်မာ စကားမှာ သူမ ဆိုတဲ့ စကားလုံးမရှိဘူးလို့ တလောကပဲ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို သုံးတာကို ပိုနှစ်သက်လို့သုံးလိုက်ပြန်ပါပြီ :D)
မူရင်း - Link
Posted by saw ehlor at 20:390comments
“ တခါတရံအချစ်ဆိုတာ ဆပ်ပြာဘူဖောင်းတစ်လုံးနဲ့ တူတယ် နည်းနည်းလေး ထိလိုက်တနဲ့ဖျပ်ကနဲ ပြိုကွဲသွားရလောက်အောင် ကြေကွဲထိခိုက်လွယ်တယ် ”
မူရင်း - သက်တန့်ချို
Posted by saw ehlor at 20:150comments
ယင်ကောင်များကို လေထဲ၌ လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် ဖန်တီးနိုင်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ နော်တင်ဟမ်တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များသည် ယင်ကောင်များကို လေထဲ၌ လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် ဖန်တီးပြနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပညာရှင်များသည် Diamagnetic Levitation ဟု ခေါ်သော နည်းစနစ်တစ်ရပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ရာ ယင်း၌ အလွန်အင်အား ပြင်းထန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းပြင်းအားကို အသုံးပြုထားပြီး အင်းဆက်များကို ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် မဲ့သွားစေကာ လေထဲ၌ ပျံသန်းမှုမရှိဘဲ လမ်းလျှောက်နိုင်စေခဲ့သည်။ ယင်ကောင်များသည် မြေဆွဲအားမဲ့သွားသော အနေအထား၌ မြေပြင်ပေါ်မှာထက်ပင် ပို၍လျင်မြန်စွာနှင့် ပို၍ကြိမ်ရေများစွာ လမ်းလျှောက်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
မူရင်း - SMG
Posted by saw ehlor at 20:100comments